आइपीएलमा धेरै चौका प्रहार गर्ने ५ क्रिकेटर – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौंः इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) को १३ औँ सिजन सुरु हुन धेरै समय बाँकी छैन । आइपीएल मिति नजिकिएसँगै क्रिकेट समर्थकमा उत्साह पनि थपिँदै गएको छ ।
चौका–छक्काको वर्षा हुने यो लिगमा कयौं खेलाडीले विभिन्न उपलब्धि पनि हासिल गर्छन् । यसैबीच आज आइपीएलमा सर्बाधिक चौका प्रहार गर्ने ५ क्रिकेटरको बारेमा चर्चा गर्दैछौंः
५. डेविड वार्नरः अष्ट्रेलिया क्रिकेट टीमका स्टार ब्याट्सम्यान डेविड वार्नर इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) को हरेक सिजनमा शानदार प्रदर्शन गर्छन् । उनले गत सिजनको १२ म्याचमा सर्बाधिक ६ सय ९२ रन बनाउँदै ‘अरेन्ज क्याप’ पाएका थिए ।
वार्नरले हालसम्म आइपीएलको १२६ म्याचमा ४ सय ५८ चौका प्रहार गरेका छन् । आइपीएलमा डेविड सनराइजर्स हैदरावादबाट खेल्ने गर्छन् ।
४. विराट कोहलीः भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीले आइपीएलको १ सय ७७ म्याचमा १३१.६१ को ‘स्ट्राइक रेट’मा ५ हजार ४ सय १२ रन बनाएका छ । उनी आइपीएलमा सर्बाधिक चौका प्रहार गर्ने खेलाडीको सूचीमा चौथो स्थानमा छन् । रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी)का कप्तान समेत रहेका कोहलीले हालसम्म आइपीएलमा ४ सय ८० चौका प्रहार गरिसकेका छन् ।
यो पनिः आइपीएलमा एकै ओभरमा सर्बाधिक रन दिने ५ बलर
३. गौतम गम्भीरः भारतीय क्रिकेट टीमका पूर्व ओपनर गौतम गम्भीरले आइपीएलमा १ सय ५४ म्याच खेले । जसमा उनले १२३.८८ को ‘स्ट्राइक रेट’मा ४ हजार २ सय १७ रन बनाए । दिल्ली क्यापिटल्सबाट आइपीएल करियर सुरुवात गरेका गौतमले ४ सय ९१ चौका प्रहार गरेका छन् । उनी आइपीएलमा धेरै चौका प्रहार गर्ने मामिलामा तेस्रो स्थानमा छन् ।
गम्भीरले क्रिकेटबाट सन्यास लिइसकेका छन् । उनले २०१८ मा अन्तिम पटक दिल्ली क्यापिटल्सबाट आइपीएल खेलेका थिए । गौतम अहिले राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन् । उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का सांसद हुन् ।
२. सुरेश रैनाः भारतीय स्टार क्रिकेटर रैनाका लागि आइपीएलको अधिकांश सिजन राम्रै रह्यो । हाल चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)बाट आइपीएल खेल्ने उनले १ सय ९३ म्याचमा ५ हजार ३ सय ६८ रन बनाइसकेका छन् । आइपीएलमा सर्बाधिक चौका प्रहार गर्नेको सूचीमा रैनाको नाम दोस्रो स्थानमा आउँछ । उनले हालसम्म ४ सय ९३ चौका प्रहार गरिसकेका छन् ।
१. शिखर धवनः भारतीय क्रिकेट टीमका अनुभवी ओपनर शिखर धवनका लागि आइपीएल करियर शानदार रहेको छ । उनी हरेक आइपीएल सिजनमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरिरहेका छन् ।
आइपीएल २०१९ मा दिल्ली क्यापिटल्सबाट खेल्दै धवनले १६ म्याचमा ५ सय २१ रन बनाएका थिए । उनले हालसम्म आइपीएलमा १ सय ५९ म्याचमा ४ हजार ५ सय ७९ रन बनाइसकेका छन् । जसमा उनलेसर्बाधिक ५ सय २४ चौका प्रहार गरेका छन् । –एजेन्सी
ट्याग्स: आइपीएल, इन्डियन प्रिमियर लिग, गौतम गम्भीर, चौका, डेविड वार्नर, विराट कोहली, शिखर धवन, सुरेश रैना